प्रधानन्यायाधीशलाई पनि मन्त्रीको भागवण्डा ? सर्वोच्च बारले चोलेन्द्रलाई सोध्यो ‘भएको के हो’ ? – Sunaulo Nepal TV
प्रधानन्यायाधीशलाई पनि मन्त्रीको भागवण्डा ? सर्वोच्च बारले चोलेन्द्रलाई सोध्यो ‘भएको के हो’ ?
काठमाडौ । शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले पनि मन्त्रीपरिषद्मा भाग खोजेको कुरा चर्चामा आएको छ । पाँच दलिय गठबन्धनले जवराका लागि पनि मन्त्रीको भाग छुट्याएको समाचार बाहिरिएपछि सर्वोच्च अदालत बार एशोसियशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेटेर मन्त्रीको भागबण्डाबारे प्रश्न गरेको छ।
पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनले मन्त्रीको कोटा छुट्याएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । .सर्वोच्चकै असार २८ को आदेशवाट सरकार बनेका कारण उनलाई पनि मन्त्रीको भागबण्डा गरिदिएको समाचार आइरहेका छन्।
ुपाँच दलीय गठबन्धनसँग मन्त्रीको भाग मागेकोबारे हामीले उहाँको ध्यानाकर्षण गरायौँ। के हो कुरा भनेर सोध्यौँु, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने, ुयस विषयले हामी चिन्तत पनि छौं। श्रीमानको बारेमा यस्तो कुरा आएपछि सत्यतथ्य के हो बताउनुपर्यो भन्यौं।’ उनीहरु सोमवार प्रधानन्यायधीशलाई भेट्न पुगेका थिए ।
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले यो सबै गलत भन्दै त्यसबारे आफुले विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेर स्पष्ट पार्ने बताएका छन् । उनले पत्रपत्रिकामा जे पनि आउन सक्ने भन्दै ति कुरामा विश्वास नगर्न भनेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्ति आएपछि बारले अब के गर्ने भन्ने धारणा बनाउने अध्यक्ष शाक्यले बताए। बारले यसबारेमा जतिसक्दो छिटो प्रष्ट पार्न प्रधानन्यायाधीश राणासँग माग गरेको छ।
Previous इभिनिङ वाकमा निस्केकी ३० वर्षकी महिलालाई १८ वर्ष पनि नपुगेका केटाहरुले